Ny tombony azo avy amin'ny fehin-tànana varahina | Nutri Diet
La brasele varahina Tena ankasitrahan'ireo izay mijaly amin'ny olana iraisana. Izy io dia heverina ho fanoherana mahery vaika, manala ny fanaintainana ateraky ny rheumatism sy ny osteoarthritis, ary koa ny fanaintainan'ny mpiara-miasa. Ny varahina dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny taolana. Raha ny marina, ny bracelet varahina dia atolotra ho an'ny atleta, izay tsy fahampiana amin'ity mineraly ity dia mety hiteraka fahatapahan'ny havizanana.
Zava-dehibe ny fahalalana fa ny varahina dia singa iray tena ilaina amin'ny fiasan'ny zavamananaina tsara. Eo amin'ny tsirairay amin'ireo sela, ny varahina dia mandray anjara amin'ny fanaovana hemôglôbinina ary mampitombo ny tahan'ny sela mena.
Ny tsy fahampian'ny varahina dia misy fiantraikany amin'ny tsy fahampian'ny anemia. Ho an'ireo izay mijaly amin'ity aretina ity, ny fanaovana brasele varahina manodidina ny tanana no fomba tsara indrindra manome ny anjara varahina isan'andro izay ilain'ny vatana. Mifandraika amin'ny hoditra, ity singa misy ny bracelet ity dia hiparitaka ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny vascularization.
Tombontsoa azo avy amin'ny fehin-tànana varahina
Toy izany koa, varahina dia antioxidant tena tsara. Izany dia mahatonga azy io ho fanafody tsara hiadiana amin'ny adin-tsaina sy ny fahanterana aloha. Iray amin'ireo andraikitra ireo koa ny fanafoanana ny poizina sy ny fako izay ao amin'ny vatana ary hampiroborobo ny fitaterana oksizena amin'ny alàlan'ny ra. Mba hanana fahasalamana tsara, ny fanaovana bracelet varahina dia mety ho vahaolana mety.
Paprika de la Vera antioksida tonga lafatra
Ho an'ny vehivavy mitsaha-potoana, ny bracelet varahina dia fanafody mahomby hanasitranana ireo olana mifandraika amin'ity dingana ity amin'ny fiainana. Raha ny marina dia plugin io tena ilaina amin'ny be antitraKoa satria efa antitra ianao, dia mila mihazona ny taolanao ho salama, hisorohana ny osteoporose, ary hitazomana ny fandanjana tsara ny rafi-pitabatabana.
Ho an'ireo izay mijaly aretina mifindra miverimberina, ny bracelet varahina dia mety ho mpiara-miasa tsara hamita ny fitsaboana antibiotika. Amin'ity tranga ity dia tokony hitafy maharitra izy io. Na eo aza ny zava-misy fa ny varahina dia anti-infective tena tsara, tsy afaka manolo antibiotika mihintsy izy io. Noho izany, ny fanaovana brasele varahina dia tsy manilika ny zava-misy fa mila manatona dokotera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Ny tombontsoa azo avy amin'ny fehin-tànana varahina
fampahalalana tena tsara. Androany aho dia nanapa-kevitra ny hanao peratra sy peratra varahina
Mimi dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara! Hividy peratra, haba sy rojo koa aho !!
Mamaly an'i Mimi
Novakiako fa afaka mampiasa vola madinika varahina ao anaty kiraro ianao amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny tongotra, tiako ho fantatra raha marina izany
Ny Lapan'i Nelky dia hoy izy:
Heveriko fa hevitra tena tsara izany
Valiny tamin'i Nelkys Castillo
Tena tsara, nijaly tamin'ny hozatra sy hozatra aho, nividy fehin-tànana aho ary nahasitrana ny Fahasalamako, androany dia mandeha amin'ny jogging aho ary tsy tafarina toy ny 20 taona ho an'ny vatako!
Nahatsapa fanaintainana be teo amin'ny lohaliko ankavanana sy ny tanako ankavia aho, tadidiko fa nanana brasele aho ary napetrako teo amin'ny soroko havia, ny andro iray rehefa afaka kelikely dia nanjavona ny fanaintainana, azoko atao tsara ny manondrika ny lohaliko.
Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny rano amin'ny tantely
Fisorohana ny sery amin'ny fahavaratra amin'ity toner tsotra ity